जाजरकोट, वैशाख ४ - जाजरकोटमा तीन सातादेखि फैलिएको मौसमी रुघाखोकी र स्वाइन फ्लुबाट थप तीन जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै मृत्यु हुनेको संख्या २० पुगेको छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार अर्छानी गाविस- २ का ५० वर्षीय बादी टमटा, अर्छानी- ७ का ५८ वर्षीय हंशबहादुर टमटाको उपचारकोक्रममा मृत्यु भएको छ ।
फ्लुले पजारु- ४ की २६ दिनकी बालिका ऋतु टमटाको पनि मृत्यु भएको छ ।
कतै फैलियो, कतै नियन्त्रण
तीन साताअघि फैलिएको मौसमी रुघाखोकी र स्वाइन फ्लुको संक्रमण पैंक र सक्ला गाविसमा नियन्त्रणमा आउन थालेको छ । ती गाविसमा बिरामी संख्या घटेको छ । बिरामी आउन छाडेकाले नियन्त्रणमा आएको हुन सक्ने चिकित्सकको दाबी छ । तर नायकबाडा र टालेगाउँमा भने संक्रमण फैलिँदो क्रममा छ । प्रकोप नियन्त्रणमा नआउँदा सर्वसाधारणमा स्वाइन फ्लुको त्रास हटेको छैन ।
पंैकमा १ हजार ३ सय बिरामीको उपचार गरिएको डा. दीपक पुनले बताए । 'अब त्यहाँ समस्या छैन, विस्तारै कमी आउन थालेको छ,' उनले भने । त्यस्तै, सक्लामा रहेका डा. गुणनिधि शर्माले पनि बिरामीको संख्या घटेको बताए । टालेगाउँमा ३ सयभन्दा बढी बिरामी परेको शिक्षक वीरबहादुर हमालले जनाए । त्यहाँ सेनाको स्वास्थ्य टोलीबाट बुधबार २ सय बिरामीले उपचार गराएको उनले बताए ।
टालेगाउँमा १० बिरामी सिकिस्त छन् । त्यस्तै, नायकबाडाको वडा १, २, ३ र ४ मा १ सय ५० भन्दा बढी बिरामी परेका छन् । ती गाउँमा एउटै घरमा ३/४ बिरामी रहेको स्थानीय जनकबहादुर शाहीले बताए । मजकोट, झाप्रा र कोर्ताङमा पनि रोगको प्रकोप फैलिएको छ ।
गत चैत दोस्रो साता मजदुरी गर्न भारत गएका गाउँका युवा फर्केलगत्तै रोग संक्रमण फैलिएको शिक्षक हमालले बताए । रोगको सुरुवात अर्छानी र टालेगाउँबाट भएको थियो । त्यसपछि पैंकमा फैलियो । जिल्लाबाट बर्सेनि भारतको सिमला, उत्तराञ्चल, मुम्बई, चन्डीगढलगायत सहरमा रोजगारीका लागि जानेको संख्या उल्लेख्य हुने गरेको छ । चैते दसैं मनाउन आएकाबाटै मौसमी रूघाखोकी र स्वाइन फ्लु फैलिएको हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मीले शंका गरेका छन् । 'भारतबाट फर्किनेहरू कतै पनि स्वास्थ्य परीक्षण नगराएर घर पुग्छन् । उनीहरूबाटै रोग भित्रिएको हुन सक्छ,' हमालले भने ।
रोग फैलिनको मुख्य कारण दूषित पानीको प्रयोग, खुला आवागमन, सरसफाइको कमी, चिसो वातावरण र रोग लागे पनि स्वास्थ्य संस्था नजाने प्रवृत्ति रहेको डा. पुनले बताए । रोग नियन्त्रणका लागि ५ चिकित्सकसहित २४ स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगतबहादुर बस्नेतले बताए ।
स्वाइन फ्लु प्रकोप बढेपछि जिल्लाका सम्पूर्ण शिक्षण संस्था दुई साताका लागि बन्द गरिएका छन् । जिल्लाका सामुदायिक र निजी विद्यालय, उच्चमावि र क्याम्पस गरी ४ सय ५० शिक्षण संस्थामा झन्डै ८० हजार विद्यार्थी पढ्छन् । त्यस्तै, प्रशासनले जिल्लाभर रोग नियन्त्रणमा नआउँदासम्म भेला र आमसभा गर्न समेत रोकेको छ । प्रजिअ बस्नेतले भेला तथा जमघटबाट रोग फैलिन सघाउ पुग्ने हुँदा यस्तो निर्णय गरिएको बताए । त्यस्तै, सर्वसाधारणलाई अनिवार्य मास्क लगाएर हिंड्न अपिल गरिएको छ ।
More in this category: « जाजरकोटमा फ्लूबाट थप एकको मृत्यु, मृतकको संख्या १८ पुग्यो	डा. केसी जाजरकोट हिँडे »